TANDREMO - Mpanendaka eo Ampasika !!!! Aleo tsy mivaoka ny fiara - Dinika forum.serasera.org
TANDREMO - Mpanendaka eo Ampasika !!!! Aleo tsy mivaoka ny fiara
Fitohizan'ny hafatra : TANDREMO - Mpanendaka eo Ampasika !!!! Aleo tsy mivaoka ny fiara
alexandra32 - 06/11/2017 13:04
Ampasika : Kapohina ny fiara dia endahina ny mpandeha
(06-11-2017) - Zary mitovy hatrany ny fanendahana olona izay tratry ny fitohanan’ny fifamoivoizana. Tetsy amin’ny tetezan’Ampasika, toerana izay efa mampimenomenona ny maro ny fisian’ny andian-jiolahy manendaka anaty fitohanana, no nisy mpivady efa misotro ronono izay niharan’ny herisetra.
Tsy miova firy ny fiasan’ireo olon-dratsy : misy mikapoka mafy be ny vatan’ny fiara ka raha vao mivoaka amin’izay ny ao anatiny dia manararaotra miditra ireo olon-dratsy. Ambanana amin’ny zava-maranitra ireo olona ary rehefa tsy afa-manoatra intsony dia raofina daholo izay entana mety amin’ireo olon-dratsy. Lasa ny finday, ny paoketra ary hatramin’ny lohan’ny autoradio aza. Izany no nanjo ireto mpivady efa nahazo taona ireto.
Nisy tokoa ny olona nahatsikaritra, isan’izany ireo olona izay tao anatin’ny fiara tao afara, satria tao anaty fitohanana no nitranga ny fandrobàna. Raha saika hanavotra izy ireo dia toa efa vitan’ireo olon-dratsy kajy ny mety hisehoan’izany ka efa nandraisany fepetra : nisy andian’olona nipoitra avy ao anatin’ny fitohanana ary mbola nandrahona tamin’ny zava-maranitra koa.
Tsy nisy afa-nikofoka fa dia nijery fotsiny ny habibiana sisa no azo natao. Raha ny fanazavan’izay nahita dia ankizy mbola tanora kely, tombanana ho tsy mbola misy ampy taona, ireo nifandrimbona tamin’ny fanafihana tao anaty fitohanana. Nampalahelo ny olona ny nahita ilay ramatoabe izay nitomany mafy, teo ihany ny fandrobana nanjo azy sy ny vadiny, fa koa mbola nisy fikasihan-tànana nanjo azy koa. Matetika miverina ny fandrobana anaty fitohanana ary ny olona aza dia efa mifampitaona mba ho mailo any anaty tambajotran-tserasera izay misy maro ny mitsangana ho vavolombelona, isan’ireo niharan’ny asaratsy.
tovorandria - 25/11/2017 13:53
tss ivakin i hery loha an zany, ze ijanonany am fomba maloto eo am fitondrana aloha zao no priorite ary ko ny fivarotana tany sy bois de rose, sy anangonana am paosy ny fanampiana avy any ivelany